Calaamadinta: Isku duubashada Websaydhada Iskudhafka leh Webka Wareegga Kordhinta Kumbuyuutarka
Web Scraper waa plug-ka Google Chrome browser loo dhisay si loo soo saaro macluumaadka bogagga iyo bogagga internetka.Isticmaalida kordhinta chrom barta shabakadda , waxaad abuuri kartaa bogag internet ah oo ku saabsan sida bogga internetka ama websaydka loo soo celiyo. Kaarkaaga bogagga, sawirada shabakadda waxay ku socotaa bogga internetka waxayna xakameysaa dhammaan macluumaadka khuseeya sida lagu faray.
Faa'iidooyinka Shabakada Web-gareerka ah ee Korantada
Xogta laga helay isticmaalka isticmaalka korriinaha chrome-ka lagu dhoofiyo ayaa loo dhoofiyaa sida feylka isku-dhafan (CSV). Dharbaaxaha Webka waa fure ah dhibicda wax lagu riixo oo loo isticmaali karo qof kasta. Sidaa darteed waxaad ku badbaadin kartaa lacagtaada iyo waqtigaaga isla mar ahaantaana isla markiiba dib u hel macluumaadka qiimaha leh ee shabakadda.
Webka waxaa ka buuxsamay macluumaad faa'iido leh oo qiimo leh. Si kastaba ha noqotee, helitaanka xogta qaabab la adeegsan karo oo loo akhrisan karo had iyo jeer maaha mid fudud. Tani waa sababta aad u baahan tahay warshadaynta chrome kordhinta webka. Diiwaanka dadwaynaha, fariimo, liiska tartanka, iyo dib u eegista user ayaa loo rogi karaa xog qiimo leh. Iyadoo Web Scraper, dhammaan xogtan waa la xoqin karaa oo loo rarayaa si raaxo leh.
Qodobada caadiga ah ee saameeya waraaqaha webka
ka dib markaad la kulanto sawir jaban
Dhibaatada qashinqarta bogga
URL aan dhammaystirnayn oo isku xirka faafaya
Web Gaariga: Dhibaatada Dhexdhexaadiyaha
Web Boorsada waa tayo sare oo si fudud loo isticmaali karo software-ka. Si aad xogta uga qaadatid bogagga internetka iyo bogagga shabakadaha, waa inaad doorataa bartilmaameedka-qoraalka ah halka sawir-qaadaha uu shaqeynayo intiisa kale. Maadaama mashiinka webka lagu dhex mari karo daruuraha, uma baahnid inaad ka walwashid khaladaadka isdaba-gelinta ama arrimaha kale.
Iyada oo daabacaadda webka, natiijooyinka aad u baahan tahay ayaa si deg-deg ah loogu riixaa faylka CSV. Haddii aad doorbido inaad ku kaydiso xogta Couch DB ama Chrome ee kaydinta deegaanka. Uma baahna inaad argagaxto sababtoo ah maaha barnaamijka. Haddii aad isticmaali karto browserka Google Chrome, waxaad isticmaali kartaa xoqitaanka shabaqa fidinta ee chrome.
Haddii xalkaaga xigaagu yahay inaad kireysato ciidan tababar ah si aad u xoqdo xogtaada oo dhan maalintii oo dhan, xalka kharashka ku baxaya ayaa kaliya garaacay albaabka. Iyadoo sawir gacmeed, uma baahnid kombiyuutar si aad u sameyso xalka naqshadeynta xogtaada. Dhammaan nidaamka saaridda xogta ayaa laguu samayn doonaa. Soo daji oo ku rakib bakhtiiyaha shabakada bilaashka ah ee dukaanka Google Chrome.
Tusaalooyinka 'Web Scraper plugin'
Web Scraper wuxuu leeyahay waxyaabo la xidho kuwaas oo gacan ka geysanaya hannaanka mashaariicda mashaqadaada. Waa kuwan sifooyinka muhiimka ah ee ay tahay inaad ogaato oo ku saabsan:
La socota shabakada Chrome
Web Scraper waa plugin Chrome ah oo soo saartay xog sida ku xusan bogga. Iyada oo la kordhinayo, waxaad kari kartaa qiimeyn hal ama dhowr ah ama aad xoqin kartaa xogaha waaweyn ee xogta iyada oo loo marayo jadwal go'an.
Dhoofinta xogta la soo saaro sida CSV
Qalabkan feylka ah ee la soo dhoofiyo ayaa la dhoofiyaa xogta sida qiimaha kala-jajaban. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ku kaydin kartaa xogta la soo saaray sida CouchDB ama Chrome ee kaydinta deegaanka.
Macluumaadka soo-jiidashada goobaha firfircoon iyo boggaga
Isticmaalida fiilada Web Scraper, waxaad ku dari kartaa barta internetka ee qeexaya bartilmaameedka qoraalka ah ee bogga internetka Source . Qaado khibraddaada qaska ah ilaa heer kale adiga oo ku rakibaya Web Scraper on Google Chrome browser!